​Shacab iyo Shabaab ku dagaallamay Hiiraan
BALADWEYNE, Somalia- Wararka ka imaanaya deegaanka Luuq Jeeloow ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi ka dhacay dagaal khasaaro gaystay kaasoo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo mallayshiyaad katirsan Al Shabaab kuwaasoo muddo ku sugnaa halkaasi.
Iska hor-imaadka labada dhinac oo soo bilowday shalay ayaa wararku sheegayaan in lagu dilay horjooge sare oo kooxdaasi u qaabilsanaa dhibaataynta shacabka kaasoo magaciisa lagusoo koobay Maxamed Cali “Dhegaweyne”.
Waxaa horjoogahaasi lala dilay saddex kale oo kamid ahaa ilaaladiisa.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dhinaca dadka deegaanka soo gaaray.
Dagaalka labada dhinac ayaa bilowday kadib markii Al Shabaab deegaankaasi ku biraysay nabadoon caan ahaa.
Jeneraal Cumar Aadan Xasan “Cumar dheere” oo ka tirsan saraakiisha ciidanka XDS ayaa Radio Muqdisho u sheegay in dagaalkaasi oo soo billowday habeen hore uu socday shalay ilaa xalay, isagoo tilmaamay in dadka deegaanku ay ku guuleeysteen iney Shabaab ka saaraan deegaanka Luuq Jeeloow oo 20-km dhanka Galbeed kaga toosan magaalada Beledweyne.
Wuxuu intaasi raaciyay in shacabku ka awood roonaadeen kooxda Al Shabaab isagoo intaasi raaciyay in ciidamo katirsan kuwa Somalia iyo dadka deegaanku kawada shaqayn doonaan adkaynta nabad-galyada.
Xaaladda goobaha lagu dagallamay ayaa iminka dagan balse waxaa muuqata saan colaadeed oo labada dhinac u dhaxaysa.
Maaha markii ugu horraysay ee shacabku u istaagaan sidii ay ula dagaallami lahaayeen Al Shabaab, waxaana taasi keentay markii ay waayeen doorkii dowladda islamarkaana si xowli ah u siyaaday dhibaatada ururkaasi.
Muddo kahor waxaa baraha Internetka lagu baahiyay 80 jir qori u qaatay sidii uu ula dagaallami lahaa ururka Al Shabaab isagoo mar uu la hadlay warbaahinta gudaha sheegay inaysan jirin wax kaalmo ah oo ay ka helaan dowladda Somalia kaasoo ku aadan dhinaca hubka iyo gaadiidka.
​Uganda oo ciidamo cusub usoo dirtay Somalia [Sawirro]
Caalamka 19.07.2016. 13:45
MUQDISHU, Somalia- Dowladda Uganda ayaa dalka Somalia usoo dirtay ciidamo cusub oo qayb ka noqon doono howlgalka AMISOM, waxayna guutada la keenay badali doontaa kuwo kale oo lal sheegay inay guteen waajibaadkii saarnaa.
War kasoo baxay taliska AMISOM ayaa lag ...
Al shabaab oo weerar qorsheysan ku qaadey xero ku taal Koonfurta Somaliya
Soomaliya 11.07.2016. 12:31
​AMISOM iyo Al Shabaab oo ku dagaallamay Baraawe
Soomaliya 17.06.2016. 19:02
Ururka Al shabaab oo toogasho ku diley afar nin
Soomaliya 11.06.2016. 13:15
​Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dileen 20 katirsan Shabaab
Soomaliya 05.06.2016. 14:42
Al Shabaab oo sii daysay qaar kamid ah Shaqaale ay ka afduubteen Hiiraan
Soomaliya 07.04.2017. 14:40
Al-Shabab oo weerartey saldhiga milatari ee Laanta Buur
Soomaliya 21.03.2016. 06:25
Al Shabaab oo xeebta ka weeraray degmada Baraawe
Soomaliya 23.03.2017. 10:23